Mahita an'i Jesosy ao aminao aho - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2014-03 mpandimby ny Magazine > Hitako ao aminao i Jesoa
Nanao ny asako toy ny mpanaram-boankazo tao amin'ny fivarotana fanatanjahan-tena aho ary niresaka tamina mpanjifa tamina mpanjifa iray. Vao handeha izy, dia nitodika tamiko indray, nijery ahy izy ary niteny hoe: "mahita an'i Jesosy ao aminao aho".
Tsy azoko antoka hoe ahoana ny fihetsik'io. Tsy nahamaivana ny foko izany fanambarana izany fa nanosika hevitra ihany koa. Inona no tsikaritrareo? Ny famaritana nataoko hivavaka dia izao: Miaina fiainana feno hazavana sy fitiavana an'Andriamanitra. Mino aho fa nomen 'i Jesosy ahy izao fotoana izao mba hahafahako manohy mitarika amin' izao fiainana fiankohofana izao ary ho fahazavana mazava ho azy.
Mbola tsy nahatsapa toy izany foana aho. Rehefa nitombo tamin'ny finoana aho dia nitombo ihany koa ny fahatakarako ny fanompoam-pivavahana. Arakaraka ny nitomboako sy nanompoako tao amin'ny fiangonako, dia tsapako fa ny fanompoana dia tsy hoe mihira fiderana na fampianarana fotsiny raha mbola zaza. Ny fiankohofana dia midika hoe mitarika amin'ny fo manontolo ny fiainana nomen'Andriamanitra ahy. Ny fiankohofana dia ny valim-pitiavan'Andriamanitra ny fitiavana satria mipetraka ato amiko.
Ity misy ohatra iray: Na dia nino foana aho fa zava-dehibe ny mandeha mitazona ny tanany miaraka amin'ilay namorona antsika - aorian'ny zava-drehetra, io no anton'ny fisiantsika - naharitra kelikely alohan'ny nahafantarako fa tena gaga sy faly aho miankohofa eo anatrehan'Andriamanitra sy misaora ny famoronana. Tsy resaka mikasika zavatra tsara tarehy fotsiny akory izany, fa zava-tsapa fa ny Mpamorona be fitiavana dia namorona ireo zavatra ireo mba hahafaly ahy, ary rehefa tsapako fa manompo sy midera an'Andriamanitra aho.
Ny fototry ny fanompoam-pivavahana dia fitiavana satria Andriamanitra tia ahy dia te hamaly azy aho ary rehefa mamaly aho dia mivavaka aminy. Toy izany koa ao amin’ny taratasy voalohany nosoratan’i Jaona: “Aoka isika ho tia, fa Izy no efa tia antsika voalohany” (1. Johannes 4,19). Ny fitiavana na ny fanompoam-pivavahana dia valiny ara-dalàna tanteraka. Rehefa tia an’Andriamanitra amin’ny teniko sy amin’ny asako aho, dia mitsaoka Azy aho ary miantso Azy mandritra ny fiainako. Ao amin'ny tenin'i Francis Chan: "Ny zava-dehibe indrindra amin'ny fiainana dia ny hahatonga azy ho zava-dehibe indrindra sy ny fanondroana azy." Tiako ho levona tanteraka ao aminy ny fiainako ary amin'izany ao an-tsaina dia mitsaoka azy aho. Satria ny fitiavako azy dia maneho ny fitiavako azy, dia lasa hitan'ny olona manodidina ahy izany ary indraindray izany fahitana izany dia miteraka fanehoan-kevitra, toy ny mpanjifa ao amin'ny fivarotana.
Ny fihetsik'izy ireo dia nampatsiahy ahy fa tsapan'ny olon-kafa ny fomba itondrako azy ireo. Tsy ampahany amin'ny fiankohofana amiko fotsiny ny fifandraisako amin'ny hafa, fa taratry ny olona ivavahako ihany koa. Ny toetrako ary izay ataoko tarehiko dia karazana fanompoana fanompoana koa. Ny fiankohofana dia midika hoe mankasitraka ny Mpamonjiko sy mampita azy aminy. Ao amin'ny fiainana izay nomena ahy, miezaka aho araka izay tratry ny saiko mba hahatratrarana ny fahazavany amin'ny olona maro ary mianatra tsy tapaka aminy aho - amin'ny alàlan'ny famakiana Baiboly isan'andro mba hisokatra amin'ny fidirany amin'ny fiainako, miaraka amin'ny olona ao amin'ny ahy Mivavaka amin'ny fiainana na mifantoka amin'ny tena zava-dehibe rehefa mihira fiderana. Rehefa mihira ao anaty fiara aho, ao an-tsaiko, any am-piasana, manao trifika isan'andro na misaintsaina hira fiderana, dia mieritreritra ilay olona nanome aina ahy aho ary manompo azy.
Ny fivavahako dia misy fiantraikany amin'ny fifandraisako amin'ny olon-kafa. Raha Andriamanitra no laka ao anatin'ny fifandraisako dia hanome voninahitra sy hanandratra azy ireo izany. Izaho sy ilay namako tsara indrindra dia mivavaka foana isaky ny mandany fotoana ary alohan'ny hisarahana. Amin’ny fijerena an’Andriamanitra sy ny faniriantsika ny sitrapony dia misaotra Azy noho ny fiainantsika sy ny fifandraisantsika isika. Satria fantatsika fa tafiditra ao anatin'ny fifandraisantsika izany, ny fankasitrahantsika ny fisakaizantsika dia endrika ivavahana.
Mahagaga fa mora ny manompo an'Andriamanitra. Rehefa manasa an’Andriamanitra ao an-tsaiko, ny foko ary ny fiainako aho - ary hikatsaka ny fanatrehany eo amin’ny fifandraisako sy ny fiainako andavanandro - ny asa fanompoana dia mora tahaka ny misafidy azy hiaina sy ho tia ny olon-kafa tahaka ny ataony. Tiako ny miaina fotoam-pivavahana ary fantatro fa tian Andriamanitra ho anisan'ny fiainako andavanandro. Matetika aho manontany "Andriamanitra, ahoana no ilainao mba hampandehaniko amin'ny fitiavanao anio?" Amin'ny teny hafa: "Ahoana no hivavahako aminao anio?" Ny drafitr'Andriamanitra dia lehibe lavitra noho izay noeritreretintsika. Fantany ny tsipiriany rehetra eo amin'ny fiainantsika. Fantany fa mitohy ato amiko ny tenin'ity mpanjifa ity mandraka androany, ary nandray anjara tamin'ny tiako ambara amin'ny fiankohofana sy ny dikan'ny hoe miaina fiainana feno fiderana sy fiankohofana.
Nataon'i Jessica Morgan